पढ्नैपर्ने १११ नेपाली पुस्तक, कुनै छुटे कि ? – मुलधार न्युज
Home > Front News > पढ्नैपर्ने १११ नेपाली पुस्तक, कुनै छुटे कि ?
२२ माघ २०७४, सोमबार ००:०९
२० माघ, काठमाडौं । दैनिकजसो एउटा पुस्तक सार्वजनिक भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ । प्रकाशनको गति यति धेरै भइसक्यो, ती सबैको खबर सार्वजनिक गर्न हरेक मिनेट अपडेट हुने अनलाइन पत्रिकाहरु पनि असमर्थ हुन थालेका छन् । यसबाट पुस्तक प्रकाशनको क्रम बढेको मात्र होइन, पठन संस्कृति पनि उकालो लागिरहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । बजारमा लेखकहरु सेलिब्रेटी हुँदै गएका छन् । र, लेखस्वले नै उनीहरुको गुजारा चल्न थालेको छ । केही समयअघि यो दिवास्वप्नजस्तो थियो ।
चार महिनामा उपत्यकामा ८१ को मृत्यु, अधिकांश चालकको लापर्वाहीले दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाई